Ololaha culimada taagersan Farmaajo, Fahad iyo Qatar - Caasimada Online
Home Maqaalo Ololaha culimada taagersan Farmaajo, Fahad iyo Qatar
Ololaha culimada taagersan Farmaajo, Fahad iyo Qatar
By Dr. Maxamud M. Culusow
Waxaa maalmahaan baraha bulshada qabsaday khudbadaha dhawr wadaad (Sheikh) ee aad looga yaqaan Soomaaliya ay ku weerarayaan si la garan karo mucaaradka dowladda federaalka, gaar ahaan Midowga Musharrixiinta, kuwaaso ay ku eedeynayaan inay yihiin siyaasin damac qaaday, kana daran Al-Shabaab, inay caqabad ku yihiin wax qabadka dowladda federaalka ee talada haysa, inay yihiin mufsidiin aan aqoonsaneyn qaddarta ilaahey ama inay colaad ay u qabaan Madaxweyne Farmaajo darted ay wadanka burburinayaan. Waxay ku doodayaan in mucaaradka raalli ku ahaadaan takrifalka (hoggaaminta wacan) Madaxweynaha talada haya. Waa olole horey u socday, haseyeeshe maalmahaan labo lixaadsaday, wadaado cusubna ku soo biireen.
Wadaada waxay ku eedeynayaan mucaaradka dambi iyo damaca ay galeen ama leeyihiin Farmaajo iyo Fahad.
Culumada waxay iska indhatirayaan dhibaatooyinka faraha badan, dib u dhaca, iyo musuqmaasuqa dalka ka dhacay 5 sano ee la soo dhaafay oo ilaa maanta socda, kana sii daraya, kuwaaso ay mas’uul ka yihiin Farmaajo iyo Fahad iyo taagerayaashooda ajnabiga ah ee Qatar, Eritrea, iyo Ethiopia.
Mas’uul la siiyay kalsooni shacab (Farmaajo ii geey), 2.5 bilyan doolar sannadkii, 40,000 ciidan ah, 5,000 shaqaale dowladeed, dastuur uu raaco, barnaamij shaqo uu fuliyo, iyo 4 sano ee muddo xileed ah, cidna kama hor istaagin gudashada shaqadiisa hab waafaqsan dastuurka, sharciga, iyo qorshaha shaqo ee la siiyay.
1. Curyaaminta Barlamaanka Federaalka matalayay shacabka iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya;
2. Dagaalka dowladda federaalka ku haysay 5 sano Dowlad Goboleedyada kaaso curyaamiyay fulinta dhammaan arrimihii mudnaanta lahaa ee 5ta sano la qorsheeyay, taaso keentay dib u dhac dhaawacay aayaha dhallinyarada Soomaaliyeed.
3. Boobka, musuqmaasuqa, maamulxumada, iyo xisaab xir la’aanta hantida Ummadda Soomaaliyeed. Hay’adda daahfurnaanta Caalamiga ah ( International Transparency), Hantidhawraha Guud ee Qaranka Soomaaliyeed, iyo Guddiga Maamulka Maaliyadda ( Financial Governance Committee) waxay isku raaceen in Soomaaliya tahay dal musuqmaasuqa la degay.
4. Waxaa la boobay doorashada Hirshabelle, Koofur Galbeed, iyo Galmudug, waxaana la hagardaameeyay diyaarinta doorashada Barlamaanka federaalka si loo helo muddo kororsi sharcidarro ah, taaso lagu dhawaaqay 2021, haseyeeshe laga noqday kaddib markii dadka reer Muqdisho lagu kallifay inay dhiig iyo barakac huraan si ay u difaacan dastuurka, xorriyadooda iyo karaamadooda oo lagu xadgudbay.
5. Waxaa lagu xadgudbay qodobbada dastuurka 60 iyo 91 ee ku saabsan muddo xileedka 4 sano ah ee Barlamaanka Federaalka iyo Madaxweynaha, oo astaan u ah qabashada doorasho xor iyo xalaal oo heshiis lagu yahay si loo ilaaliyo in awoodda dowladda lagu kasbado si sharci ah. Waa daruuri soo banbaxa muwaadiniin damac siyaasadeed leh.
6. Waxaa sannad iyo bilo hooyaya waalidiinta 5,000 dhallinyaro ah ee loo qaaday Eritrea si baalmarsan sharciga iyo nidaamka dowladda iyo bani’aadamnimada iyo waalidiinta Sarkaalad Ikram Tahlil Faarax oo nolol iyo geeri aan lagu hayn oo NISA lagu eedeynayo.
7. Waxaa dhacay dhibaatooyin ay ka mid yihiin madax la wareeray, qaar la dilay ilaaladooda, qaar la dhaawacay, qaar la damcay in diyaarad lala rido kaddib markii loo diiday inay dhulka soo degto, DG cunaqabateyn cirka iyo dhulka la saaray Jubbaland, muwaadin loo dhiibay Ethiopia, cadaaladdarro gaartay in Al-Shabaab cadaalad loo doonto,
Waxaa nasiib darro in culumo markhaati ka ah gaboodfallada, boobka, musuqmaasuqa, iyo maamulxumada Farmaajo iyo Fahad mas’uulka ka yihiin ay ku eedeeyaan mucaaradka kuna tilmaamaan inay yihiin mufsidiin ama la mid yihiin Al-Shabaab.